स्वास्थ्य /जिबनशैली – Sanchar Patrika
काठमाडौँ । मानिसको शरीरमा तीन प्रकारको जुम्रा पर्ने गर्छ। कपाल, जिउ तथा गुप्तांगमा फरक फरक प्रकारका जुम्रा पर्छ।मानिसले जुम्रा परेपछि जिउ तथा टाउको चिलाएर अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी, महिलाको कपाल लामो र बाक्लो हुने कारण जुम्राको समस्या धेरै हुन सक्छ। जुम्रा पर्ने समस्या र त्यसबाट बच्ने उपायबारे छालारोग विशेषज्ञको सुझाब यस्ता छन्ः बाक्लो कपालमा बस्न मन पराउने जुम्राले विशेष कन्पारा, गर्दनको साइडमा असर पुर्‍याउन सक्छ। जुम्राले टोकेर धेरै चिलाएमा या कन्याउँदा छालामा संक्रमण हुन सक्छ। जसले गर्दा कपाल गाँठो पर्ने, घाउ हुने तथा गनाउने समस्या हुन सक्छ। लिखा कपालको जरामा टाँसिएको छ भने संक्रमण भएको मान्नुपर्छ। कपालको तल–तल आएको लिखा पुरानो संक्रमण हो। यसले छालालाई बढी असर पुर्‍याउन सक्छ। मानिसको कपालमा परेको जुम्राबाट छुटकारा पाउने औषधि बजारमा पाइन्छ। सो औषधिल
डा. सबिना सिम्खडाले बात्सल्या आईभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर खोलेको करिब तीन बर्ष भयो । तीन बर्षमा हजारौं निःसन्तानको पीडा खेपेका महिलाहरुलाई आमा बन्न सहयोग गरेकी छन् । निःसन्तानपन भएर उपचारको लागी नेपाल बाहिर जानेहरुलाई नेपालमै उपचार संभव छ भनेर देखाएकी छन् । पछिल्लो समय निःसन्तानपन (बाँझोपना) को बारेमा जनचेतना फैलाउँदै त्यसबाट जोगिन समेत डा. सिम्खडा आग्रह गर्छिन् । बिहे गरेको एक बर्ष सम्म पनि कुनै पनि अस्थिाई साधनको प्रयोग बिना शारिरक स*म्पर्क गर्दा बच्चा बसेन भने बाँझोपना हुने डा. सिम्खडा बताउँछिन् । उमेर जति बढ्दै गयो उत्तिकै बाझोपना हुने संभावना हुन्छ । उमेरको हकमा ३० बर्ष माथि अझ बढी जोखिम हुने संभावना रहन्छ । दैनिक जस्तो शारिरिक सम्पर्क गर्दा वा महिनावारी भएको १० देखी २० दिन भित्र सम्पर्क हुँदा पनि बच्चा बसेन भने तुरन्त सम्बन्धीत चिकित्सकलाई देखाउन उनी आग्रह गर्छिन् । पहिले नेप
यस्ता खाना खानमा नगर्नुहोस् लापरवाही, आन्द्रामा प्वाल र घाउ हुनसक्छ !
काठमाडौँ । हाम्रो पेटमा अम्ल एसिड हुन्छ, जसले खाना पचाउन सहयोग पु–याउँछ । तर, कहिलेकाँही अम्लको मात्रा बढी हुँदा ग्याष्ट्रिक हुने गर्छ ।कतिपय अवस्थामा उक्त एसिडले गर्दा आमाशय र सानो आन्द्रामा घाउ हुनेसमेत हुन्छ । यसैलाई अल्सर भनिएको हो । अव्यवस्थित खानपानका कारण पहिले ग्याष्ट्रिक र पछि अल्सरको समस्या हुने गर्छ । तसर्थ खानपानमा विशेष ध्यान पु–याउनुपर्छ । सकभर पेट खाली राख्नुहुँदैन । बढी चिल्लो, अमिलो र पिरो सेवन नगर्ने । त्यस्तै सकभर जंकफूड सेवन नगर्ने । धुम्रपान, मध्यपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट टाढा रहने । दुखाईबाट बचाउने र बाथरोगको औषधि नियमित सेवनबाट समेत अल्सर हुने गर्छ । यसकारण सकेसम्म यस्ता औषधि सेवन नगर्ने वा कम गर्ने । अल्सर गराउने किटाणुको संक्रमणबाट बच्नुपर्छ । खानामा जथाभावी मसला, रङ आदि प्रयोग गर्नुहुँदैन । सागसब्जी, फलफूल र नरम खानेकुरा प्रशस्त मात्रामा सेवन ग
काठमाडौँ । महिनावारी भएका बेला आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा त कुनै शं’का छैन् । महिनावारीका बेला सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन नसकेमा विभिन्न किशिमका संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ । महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने प्याड, लुगा वा न्यापकिन कस्तो प्रकारको छ र कति समयको अन्तरालमा परिर्वतन गर्ने गरिन्छ यी सब कुरा सिधै स्वास्थ्यसँग जोडिने गर्दछ । के तपाईलाई थाहा छ रु महिनावारीका बेला एक दिनमा कतिपटकसम्म प्याड परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर । महिनावारीका बेला कतिपटक प्याड परिवर्तन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको भनाइ अनुसार महिनावारीका बेला प्रत्येक ४ घण्टामा प्याड बदल्नुपर्दछ । यदि तपाई घरेलु कपडाको टुक्रा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त झन प्रत्येक २–२ घण्टामा बदल्नुपर्दछ । तर यो नियम सबैका लागि समान ढङगले लागू हुन्छ भन्ने छैन् । प्याडको प्रकृति, रगतको मात्रा हेरेर पनि प्याड परिवर्तन गर्ने स
काठमाडौँ । पछिल्लो समय व्यस्त जीवन शैली र असन्तुलित खानपानका कारण मृगौलाको समस्या सामन्य जस्तै बनेको छ। गतल खानपान तथा औषधिको साइड इफेक्टका कारण पनि मृगौला खराब हुने चिकित्सक विज्ञ बताउछन्। यस्तो समस्याबाट बच्नका लागि हामीले आफ्नो जीवन शैलीलाई अलिकति परिवर्तन गर्न सक्यौ भने पनि यसको समस्याबाट बच्न सकिन्छ। यो रोग सुरुवातमा पत्ता लगाउन निकै गाह्रो हुने गर्दछ। त्यसैले यो रोग लाग्नु भन्दा अघि केही संकेतहरु देखा पर्ने पदृछन्। यस्ता संकेत देखिनासाथ तपाईले हेलचक्राई गर्न हुँदैन्। सुरुवाती अवस्थामै सावधानी अप्नाउनुभयो भने यसको खतरा कम हुने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई मृगौला खराबीका सुरुवाती संकेतका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। १) पिसाब गर्दा पोल्नु, दुख्नु, अप्ठेरो महसुस हुनु । २) पिसाबमा रगत वा पिप देखिनु। ३) बारम्बार पिसाब लाग्नु, अझ रातको समयमा बढी पिसाब लागिरहनु ४) जिउ सुन्निनु जसला
काठमाडौँ – टाउको शरीरको निकै संवेदनशिल भाग भएको कारण पनि चिसोबाट यसलाई बचाउनुपर्छ । चिसोबाट बचाउन टोपी लगाउँदा पनि चाया पर्ने समस्या हुन्छ त्यसैले यस्ता उपाय अपनाउनुभयो भने चायाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । कागतीको रसः नुहाउनुअघि तालुमा कागतीको रस लगाएर मालिस गर्नुहोस् । कपाललाई १५–२० मिनेट राम्ररी पखाल्नुहोस् । यसले कपालमा भएको चाया भगाउन र कपालमा चमक ल्याउन मद्दत गर्छ । एलोभेरा जेलः नुहाउनुभन्दा अघि तालुमा एलोभेराको जेल लगाएर मालिस गर्नुहोस् । त्यसलाई त्यतिकै २० मिनेटसम्म छाड्नुहोस् र कपाललाई स्याम्पु लगाएर धुनुहोस् । दहीः कपाल र तालुमा दही राखेर करिब १ घण्टा त्यतिकै छाड्नुहोस् । स्याम्पु लगाएर राम्ररी पखाल्नुहोस् । यसलाई हप्ताको दुई पटक गर्नुहोस् । प्याजको रसः प्याजको रस कपालमा लगाउँदा यसमा पाईने तत्वले कपालको जरा बलियो हुन्छ, कपाल बाक्लो बनाउँछ । प्याजको रस सही रुपमा प्रयो
काठमाडौँ । गर्भवती महिलाहरुले गर्भावस्थाको तीन महिनापछि बिस्तारामा दायाँ–बायाँ, फर्कि–फर्कि अर्थात कोल्टे फेर्दै सुत्ने गरेमा मृत बच्चा जन्मिने खतरा धेरै हदसम्म कम हुने एक अध्ययनले खुलाएको छ। एक हजार गर्भवती महिलाहरुको उक्त अध्ययनले गर्भावस्थाको आखिरी महिनामा कम्मरको बलमा सुत्ने गर्नाले मृत बच्चा जन्मिने खतरा बढि भेटिएको छ। अध्ययनका क्रममा समावेश गरिएका २९१ बच्चाहरु मृत जन्मेका थिए भने ७३५ बच्चा स्वस्थ रुपमा नै जन्मिन सफल भएका थिए। शोधकर्ताका अनुसार यदि गर्भवती महिलाहरु दिउँसो अथवा राती जतिबेला सुत्दा पनि कम्मरमा जोड नदिई यता–उता फर्किदै सुत्दै गर्नु अति आवश्यक छ। तर निदाएर बिउँझिदा आफ्नो शरिरको बल कम्मरमा परेको महसुस भएमा भने त्यसलाई तनावको विषय नबनाई हल्का रुपमा लिन पनि उनीहरुको सुझाव रहेको छ। ब्रिटेनमा प्रत्येक वर्ष २२५ शिशु मृत रुपमा जन्मिने गर्दछन्। शोधकर्ताहरुका अनुसार यदि ग
एसिडीटीलाई जडदेखि निर्मुल पार्न अप्नाउनुहोस् यी उपाय
काठमाडौँ । अनियमित र अनियन्त्रित खानपानका कारण आजभोलि मानिसलाई एसीडीटी र पेटसम्बन्धी कयौँ समस्याबाट पीडित हुने गर्दछन्। यदी तपाई पनि पेटसम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने किचनमा उपलब्ध हुने चीजबाट पनि राहत पाउन सक्नुहुनेछ। आजहामी तपाईलाई एसीडीटी र पेटसम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउने केही घरेलु उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। सौँफ धेरैजसो मानिसले सौँफलाई राम्रो माउथ फ्रेशनरका रुपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तर यसको फाइदाका बारेमा भने धेरै कम व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुनसक्छ। जुन कुनै समयमा पनि तपाईलाई एसीडीटी जस्तो कुनै समस्या महशुस हुने गरेको छ भने राति थोरै सौँफमा पानी राखेर छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि बिहान उठेर त्यसलाई पिउनुहोस्। यसो गर्दा एसीडीटीको समस्याबाट राहत मिल्ने गर्दछ। ल्वाङ किचनमा मसलाका रुपमा प्रयोग हुने ल्वाङबाट पनि एसीडीटीको समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ। जुन कुनै समयम
काठमाडौँ । मकै मकैमा पाइने बेटा–क्रिप्टोसान्थिन भन्ने तत्वले फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावनालाई कम गर्छ । त्यसैले बेलाबेलामा ताजा मकै खाने गर्नुपर्छ । प्याज प्याजले पनि फोक्सोलाई सफा र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । प्याज खानाले विभिन्न खाले रोगबाट बचाउँछ, जसमध्ये फोक्सोको इन्फेक्सन पनि एक हो । अदुवा अदुवाले फोक्सोमा जम्मा भएका विकारलाई कम गर्छ । चियामा अदुवा हालेर खाने गर्नाले सास ताजा पनि बन्न पुग्छ । सुन्तला सुन्तलामा क्रिप्टोसान्थिन भन्ने तत्व पाइन्छ, जसले फोक्सोमा क्यान्सर हुने जोखिम कम गर्छ । सिस्नु सिस्नुमा आइरनको मात्रा उच्च हुन्छ । सिस्नु खानाले फोक्सोमा भएको इन्फेक्सनको प्रभाव कम हुन्छ । पिस्ता पिस्तामा गामा–टोकोफेरोल नामक एक प्रकारको भिटामिन–ई पाइन्छ, जसले फोक्सोलाई स्वच्छ राख्छ । जरीबुटी सुन्तलाको बोक्रा, युकालिप्टस ९मसला०, पुदिनाजस्ता जरीबुटीले फोक्सोलाई स
काठमाडौँ । यो संसारमा धेरै प्रकारका मानिस हुन्छन् । भनिन्छ मनुष्य भित्र २ प्रकारका मानिस हुन्छन्, पुरुष र महिला । तिनिहरुमा यस्तो मान्छे पनि हुन्छन जुन हामी भन्दा केहि फरक हुने गर्छन। जसलाई हामी ट्रांसजेंडर अर्थात तेस्रोलिङगी भन्छौं। वास्तवमा, ट्रांसजेंडरलाई पुरुष र महिलाहरुको कैटेगरीमा समावेश गर्न सकिदैन , यस प्रकारका मानिसहरुमा महिला र पुरुष दुवैको गुण समावेश हुन्छ। यस्ता मानिस वााहिरबाट पुरुष देखिन्छन तर भित्रि रुपमा महिलाहरुको गुण हुन्छ , यस्तै बाहिरबाट महिला जस्तो देखिए पनि भित्रि रुपमा पुरुषको गुण र आर्गन्स हुन्छन। कुनै पनि बच्चा कसरी बन्छ त ट्रांसजेंडर डाक्टरहरुका अनुसार प्रेग्नेंसीको पहिलो तीन महीनाको अवधिमा शिशुको लिंग बन्ने गर्छ । शिशुको लिंग निर्धारणको प्रोसेस अवधिमा यदि कुनै प्रकारको चोट, टाक्सिक खानपान, हार्मोनलको समस्याले गर्दा शिशु महिला या पुरुष बन्ने भन्दा पनि दुव